Nhazi Injinia - Suzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
Isi ihe asaa maka imepụta mmezi
Bottleneck ụkpụrụ, ibu isi & ọdụ nta.
Izere ụfọdụ ihe na-egbochi nsogbu ịbelata ikike mmepụta. Nkwa e mere & na-atụ anya mmepụta na-eji ire ụtọ injinịa.
Nhazi zuru ezu:
Gụnyere ngwaọrụ kpakọbara, mmepụta ogbako, okokụre stacking, ụlọ ọrụ na ndụ ụlọ ọrụ, green ụzọ ọkụ na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ.
Gụnyere nhazi akụrụngwa (ndinuak, ịka nká), ahụ akpụ, n'ekwú ọkụ usoro, ebutu brik, nkwakọ, wdg
Dị ka teknụzụ iji họrọ usoro nhazi ngwa ngwa, kilns, akụrụngwa ọrụ, sistemụ kọmputa, ogbako, wdg.
Ihe nchekwa ahịhịa. Mgbapịa osisi.Aging storage.Extrusion line. Green brik nchekwa.6-ọwara ihicha & 3-firing.Sintered ngwaahịa. Mbukota.
2.Ihe metụtara ọnọdụ obodo
Secondary stacking ogbe loading & ebutu technology
Shale.Xinjiang City construction.High-quality ngwaahịa
Production nke elu-ọkwa oghere ngọngọ ngwaahịa, ụlọ ọrụ dị ike, na ezi ahịa ma ọ bụ akụrụngwa na elu mmiri ọdịnaya.
Kwado ya na 7 ， 6-tunel ihicha ụlọ storage Emechara ngwaahịa nchekwa
Secondary stacking na nta ihicha ụgbọ technology
Nnukwu mmiri nke ihe, tụlee echiche akụ na ụba, usoro a kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ obere na ọkara, enwere ike ịhọrọ otu oge ma ọ bụ nke abụọ.
Secondary stacking, ma ọ bụrụ na ịbụ na nkezi nke elu-olu ada uyi, nsoje stacking dị mma karịa otu oge stacking, tumadi site keakamere ihicha n'ekwú ọkụ koodu oghere elu na-abawanye, na-abawanye na, na-eri ego dị elu karịa otu oge stacking, factory ubi dịtụ elu karịa otu oge stacking.
Usoro nhazi oge
Ngwaọrụ (kol gangue, shale, wdg) na ọdịnaya mmiri dị ala. Otu oge ịkwado na -emepụta usoro mmepụta, belata ọrụ, melite ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke ndị ọrụ, melite nrụpụta ọrụ, imepụta ihe na akpaaka dị mfe, ọnụ ahịa zuru oke karịa usoro nchịkọta Secondary.
3.Focus na akụrụngwa ukpụhọde na edo ọgwụgwọ
Mmezi ihe onwunwe
Dabere na ihe dị iche iche na ngwaahịa ndị ahụ e ji eme ihe, ogo ihe a chọrọ dị iche. Ma izugbe ụkpụrụ bụ na ezi granularity nke ngwaọrụ, plastic ngwaọrụ bụ dịtụ elu, imeghari ka elu ngwaahịa chọrọ.
Refine akụrụngwa na-ezo aka chunks akụrụngwa mebiri site na mmetụta nke ibu akụrụngwa, mgbe ahụ akụrụngwa ntụ ntụ azụ nri ngwa ngwa ọsọ nke obere ndinuak akụrụngwa dị ka wheel na nkume igwe nri, onu ngwe crusher, mpịakọta crusher, wdg n'ime Iwu akụrụngwa.
Raw ihe edo ọgwụgwọ
Ngwa akụrụngwa, ọkachasị site na mmiri akpaka na akụrụngwa elektrọnik dị ka nke ahazi, kpalite, ebuga ya na nchekwa ịka nká, na-eme ka akụrụngwa akụrụngwa mmiri, mwepụ na ịbawanye nkwụsi ike ya, na-emeziwanye akụrụngwa nke akụrụngwa, akọrọ na ihicha arụmọrụ, iji melite ngwaahịa ikike na ogo.
4.Kiln Ọdịdị, ntị na ụkpụrụ nke kwes sintering ngwaahịa
Changxing Tela brik ngwaahịa na mkpa-walled oghere brik, usoro chọrọ ala okpomọkụ, ngwa ngwa ihicha, ikuku eruba evenly, mmiri ngwa ngwa. Ya mere atọ mmiri ọkụ & otu ọkụ usoro, jide n'aka na àgwà na ikike.
Changxing Tela. 3-ọwara ihicha & 1-ọwara ọkụ usoro
5.Stacking usoro, ntị ka sintered ngwaahịa kwes ụkpụrụ
Ofzọ nke stacking dị mkpa karịa ọkụ
6.Olee akụ na ụba
Kpụrụ ndị ahụ bụ ikike dị elu, belata ọnụahịa, ọrụ dị mfe.
7.Worry, ulo oru mbo na ike izoputa
Akpaaka akụrụngwa, robot stacking, bupu ebutu, mbukota, akpaka akara usoro.
Riclọ ahịa BricMaker, ntụgharị, ọrụ nkwụsị.
Ọrụ anyị niile iji hụ na usoro ọrụ mmepụta na-aga nke ọma, hụ na ọ dị mma, nweta akụnụba nke akụnụba, belata ike oriri, meziwanye arụmọrụ, yana ihe ga-adaba adaba maka njikwa njikwa ndị ọrụ, welie onodu ụlọ ọrụ.